सुकीलाई दिएको मानार्थ नागरिकता खारेज ! - Everest Dainik - News from Nepal
सुकीलाई दिएको मानार्थ नागरिकता खारेज !
क्यानडाको संसदले म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सुकीलाई दिएको मानार्थ नागरिकको सम्मान खारेज गरेको छ । रोहिंग्या अल्पसङख्यक मुस्लिम समुदाय विरुद्धको हिंसा नियन्त्रणका लागि पहल गर्न नसकेको भन्दै क्यानाडाले सम्मान खारेजको निर्णय गरेको हो ।
रोहिंग्यामाथि नरसंहार नभएको भन्दै मानवअधिकारवादी नेतृ सुकीले हिंसाको बचाउ गर्दै आएकी छिन् । क्यानडाले सुकीलाई सन् १९९१ मा सैनिक शासकविरुद्ध शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरेको भन्दै मानार्थ नागरिकता प्रदान गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस रोहिंज्याद्वारा घरफिर्ती योजनाको विरोध
रोहिंग्या मुस्लिम समुदायविरुद्ध भएको नरसंहारलाई लिएर पछिल्लो समय सुकीको आलोचना हुँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि म्यानमारमा नरसंहार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि आक्रमण बढेपछि उनीहरु बंगलादेशमा शरण लिएका छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार, विस्थापित रोहिंग्याको संख्या सात लाखभन्दा बढी छ । म्यानमार सरकारले उनीहरुलाई पुर्नस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एजेन्सीको सहयोगमा
ट्याग्स: Rohingya Refujee, Suki